Ukufundwa kwe-e ngokunyuka | Martech Zone
NgoLwesine, Septemba 20, 2012 Douglas Karr
Sibhale malunga nokusebenzisa Iincwadi ze-e zokuthengisa kwixa elidlulileyo, kodwa amanani-nkcazo amatsha akhanyisela ukukhula okuqhubekayo kwamacwecwe kunye neendlela ze-e-Reading.
Abantu abanee-e-readers bafunda ngaphezulu kunokuba kunokwenzeka ngenye indlela, njengoko kubonakala kwintengiso ye-e-ncwadi ekhulayo. Ngenxa yoko, ukuthengiswa kwe-e-reader kuyaqhubeka nokwanda. Ngokomnye uphando olwenziwe ekuqaleni kuka-2012, i-13% yabaphandiweyo bathi banokuthi bathenge i-e-reader kwiinyanga ezintandathu ezizayo. Ukusuka kwi-infographic, Ukunyuka kweReading
Gcina ukhumbula ukuba iindleko zezixhobo ezitsha ziyaqhubeka nokuhla. Ngaphantsi kweselfowuni, abantu banokuthenga i-eReader. Ukuhambelana nokonyuka kwe-eReading yeyona khangela uPapasho. Kuba umxholo utyiwa ngokukhawuleza njengoko wenziwe, unethuba elihle lokuma ngaphandle kwesihlwele ngokuba kwezi ziphumo zophando.